Progressive Voice Myanmar » စစ်တပ်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များထံ ရောင်းချမှုပိတ်ပင်ကြောင်း LafargeHolcim ကုမ္ပဏီ ကြေညာချက်အပေါ် Justice For Myanmar ၏ တုန့်ပြန်မှု
July 27th, 2020 • Author: Justice For Myanmar • 1 minute read
ဇူလိုင် ၂၇၊၂၀၂၀၊ မြန်မာ – LafargeHolcim ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးကို စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ် Justice For Myanmar မှ ကြိုဆိုပါ သည်။ LafargeHolcim ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စစ်တပ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ၎င်းတို့၏ မြန်မာစီးပွားရေးမိတ်ဖက်များသို့ ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသည့် အရောင်းအဝယ်တစ်ရပ်ကို ယခုလို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် အနာဂတ်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့မှရှုမြင်ပါသည်။ LafargeHolcim အနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန်အခြေခံမှုများအောက်တွင် ၎င်းတို့ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်းမှုကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်အဝဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန် Justice For Myanmar မှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Justice For Myanmar ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရတနာမောင်က “မြန်မာစစ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းနဲ့ စီးပွားရေးဆက်နွယ်မှုကို ဖြတ်တောက်ဖို့ LafargeHolcim ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Justice For Myanmar က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းဟာ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် အဓိက ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝင်ငွေတွေက မြန်မာစစ်တပ်အတွက် ဆိုးရွားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲ ကျူးလွန်နိုင်စေတာဖြစ်ပြီး အများပိုင်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အကျင့်ပျက် ချစားတာတွေ၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ခိုးယူတာတွေကနေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ခရိုနီတွေ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာအောင်လုပ်ရာမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။”
တနင်္ဂနွေနေ့က SonntagsZeitung တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ LafargeHolcim အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရမှုအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ် ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ မြန်မာစီးပွားရေး မိတ်ဖက်များထံ ရောင်းချမှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်က LafargeHolcim အား “မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့နှင့် ပဋိဉာဏ်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုများရှိသည့်” နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အမည်စာရင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအားလုံးအနေဖြင့် စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်မှုများကို ဖြတ်တောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် LafargeHolcim ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သည်။
Lafarge အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် M.Y. Holding ၊ Aung Myin Thu Group တို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု ဦးပိုင်၏ ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် ဆင်မင်းကုမ္ပဏီတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဦးရဲမြင့်က M.Y. Holding ကို ဦးဆောင်သည်။ Lafarge နှင့် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာတော့ ဦးရဲမြင့်က ဆင်မင်းကုမ္ပဏီ ဘုတ်အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ ကို ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ဆက်လက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ M.Y. Holding အနေဖြင့် ဆင်မင်းထုတ်ကုန် များကို ကုန်သွယ်မှုများလည်း လုပ်ကိုင်သည်။ အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီကို ဆင်မင်းကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစောငြိမ်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ခရိုနီပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနှင့် နီးကပ်သည့် ဆက်နွယ်မှု ရှိပါသည်။ မကြာသေးခင်အချိန်ကအထိ မင်းအောင်လှိုင်၏ ချွေးမဖြစ်သူ မျိုးရတနာထိုက်သည် Apower Co. Ltd ၏ ရှယ်ယာရှင်နှင့် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး သားမက်ဖြစ်သူ လင်းမြင့်ဖွေးသည် Minn Pyae Tagon Industrial Co. Ltd ၏ ရှယ်ယာရှင်နှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးသည် Aung Myin Thu Group ၏ ကုမ္ပဏီခွဲများ ဖြစ်ကြသည်။ Aung Myin Thu Group သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအပေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို ထောက်ပံ့ကူညီရန် မြန်မာစစ်တပ်သို့ စုစုပေါင်း သိန်း ၆၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် လှူဒါန်းမှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်၏ စီးပွားရေးကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးချိန် ကတည်းက မျိုးရတနာထိုက်နှင့် လင်းမြတ်ဖွေးတို့နှစ်ဦးအား အောင်မြင်သူ ကုမ္ပဏီများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
LafargeHolcim ၏ မြန်မာစစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုနှင့် ရှိနေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် SonntagsZeitung ၏ အစီရင်ခံရေးသားမှုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်းရန် ကြေညာချက်ကို ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုပါ။
Justice For Myanmar သည် မြန်မာပြည်သူများအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုရရှိရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေသည့် အမည်မဖော်လိုသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်စုဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုလျက် စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး ရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ – (မြန်မာစစ်တပ်၏ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ) ကို အွန်လိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါ သည်။